Olee otú ị ga-esi lụọ di na nwunye ngwa ngwa? Atụmatụ
Maka ihe kpatara ya, ọ na-eme n'oge niile na maka nwanyị ihe kachasị mkpa ná ndụ bụ ịlụ di ma ọ bụ nwunye, ma ndị nwoke na di na nwunye anaghị eme ọsọ ọsọ. N'ihi ya, inwe mmekọahụ na-echere echere, mgbe ihe omume a na-atụ anya ogologo oge mere, n'ihi na ọ gaghị ekwe omume ime ihe ọ bụla. Ọ bụ ezie na ...
Nke mbụ, ọ dị mkpa ịghọta ihe kpatara kpatara ụfọdụ ụmụ nwoke anaghị eji ọsọ na-eme atụmatụ ahụ? Otu n'ime isi ihe kpatara ya bụ ịtụ egwu ọrụ. E kwuwerị, ozugbo alụmdi na nwunye ahụ kwubiri, di ọhụrụ ahụ nwere ọtụtụ ọrụ ọ na-enweghị atụ, nke onye ọ hụrụ n'anya na-atụkwasị n'ubu ya. Nwoke ahu makwa na nke a bu ebighi ebi na mgbe ihe ndi a ga-abia karia. Ma ọ bụrụ na ihe anaghị arụ ọrụ maka ya, mgbe ahụ nkọcha agaghị eme ka ị chere ruo ogologo oge. Otú ọ dị, nke a abụghị ikpe ugbu a.
Ka anyị kwuo banyere otu esi eme ka onye ị hụrụ n'anya nwee ike ịlụ di ma ọ bụ nwunye. Anyị na-agwa anyị ka anyị jiri aka anyị mee ihe iji merie ndị mmadụ ka ha wee gbaga ZAGS ozugbo.
Ndụmọdụ mbụ. Ọ dị mkpa igosi ụdị mmadụ niile na onye ị họọrọ ka ị ghara inwe mmasị na ịlụ di ma ọ bụ nwunye, ọ bụghị ihe nzuzo na mmadụ chọrọ ime ihe ọ bụla n'ụzọ dị iche. Ka isiokwu nke alụmdi na nwunye bụrụ ihe a machibidoro gị, ekwenyela ọbụna ya banyere ya. . O ghaghi ighota na omume a dabere na ya.
Ọchịchị nke abụọ. Gosi nwoke ahụ na ị nwere ike ịchọrọ ọ bụghị naanị ya, n'ihi na gburugburu ebe ahụ, ọtụtụ ndị na-adọrọ mmasị na ndị na-ahụ maka mmekọrịta siri ike nke nwere ike iburu gị ngwa ngwa. Ọ bụrụ na nke a emeghị, ọ dị mkpa ka nwoke gị kwupụta ikike ya site na ịhazi mmekọrịta ahụ.
Ọchịchị nke atọ. Maka nwoke ọ bụla dị mma, ọdịdị onye ọ họọrọ ahọrọ nnukwu ọrụ. Ya mere, na-echere onwe gị mgbe niile. Mmadụ niile na-achọ ịkwa isi banyere ndị maara ya ma chọpụta na ọ nwere otu n'ime ụmụ nwanyị kachasị mma.
Akwụkwọ nke anọ. Ndị ikom dị ka seks. Ya mere, o kwesiri ka ndi nwanyi, kwa. Ọ dị mkpa ịbịaru ezigbo onye nọnyeere onye ị hụrụ n'anya, nke mere na ọ naghị eche banyere ịgha ụgha. O kwesiri inwe obi iru ala. Ọ dị mkpa icheta na nwoke nwere mmasị na ihe ọhụrụ mgbe niile, ọ na-enwe mmasị ịnwale.
Nzukọ nke Ise. Ịnweta nri ụlọ oriri dị ebube, ma ọ dị mkpa ịzụrụ onye ị hụrụ n'anya na nri nke ụlọ, na nri nke gị onwe gị ji edozi. Onye ọ bụla maara na maka ụmụ nwoke, ọ dị mkpa iri nri obi ụtọ ma dị ụtọ. Ee, nakwa n'ime ndụ ezinụlọ bara uru ịkwadebe.
Nzukọ nke isii. Gbalịa ịghọta ọhụụ ya. Mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke nwere mmasị na-abaghị uru, ma ọ dị gị mkpa ile anya, ọ ga-amasị gị onwe gị.
Ị nwere ike ịga na onye a họọrọ nke obi gị gaa egwuregwu egwuregwu egwuregwu ma ọ bụ na-arụkwa ọrụ ụgbọ ala. Mbụ, ịnwere ike ime nke a na-amasị gị, nke abuo, ọchịchọ nkịtị ga-ahaziri gị onye hụrụ n'anya. Ma, ihe bụ isi abụghị imebi ya.
Ndị isi nke asaa. N'ụzọ dị egwu, ụmụ nwoke, dị ka ụmụ nwanyị, dị ka ekele! Gwa nwoke gi mgbe nile na obu nani ya, onye nwere obi oma. Onye ọ bụla nwere mmasị ito! Ọzọkwa, ọ dị mkpa ka nwoke ahụ mara otú nwanyị nke obi ya si jiri ha kpọrọ ihe.
Iwu nke asatọ. Abarala ya mba maka mmejọ ya na ọdịda ya. Ọ bụghị ihe nzuzo na ọ dịghị onye ga-achọ ya mgbe a na-agbazi oge ya. O b ur u na i nwegh i afọ ojuju n'ihe, i kwes igh i ikwu banyere ya, o ka mma ime ya ka onye i ch or o ch or o ime ihe di iche. Mana n'otu oge ahụ, ọ gaghị ahapụ obi ike na nke a bụ naanị ya.
Ninth Council. Ọ dị mkpa mgbe niile ị gakwuru onye ị hụrụ n'anya. N'ihe gbasara nwanyi n'enweghị enyemaka, o nwere ike inwe obi ike na ike. Ọ bụrụ na o kwuru ihe na-ezighị ezi, mee ya n'ọtụtụ ụzọ ya. Ọ naghị eche na ị ga-ahụ ma ọ bụrụ na ị gere ndị isi ya ntị. Isi ihe bụ na a dụrụ ha ọdụ.
Ndụ nke iri. Echefula na ndị ikom dị ka nnwere onwe. Ha agaghi adi na ndi nwanyi ndi na-ejide ndu ha. Ya mere, hapụ onye a hụrụ n'anya ohere nke onwe gị, etinyela aka na mkpụrụ obi ma ghara ekworo ihe ọ bụla.
Ma nke kachasị mkpa - cheta ndụmọdụ ndị a na mgbe alụmdi na nwunye ahụ gasịrị!
Kedu oge kacha mma iji kpọọ agbamakwụkwọ?
Echiche mbụ maka agbamakwụkwọ
Nwoke ahụ tupu agbamakwụkwọ ahụ
Anyị na-ede ndepụta nke ndị ọbịa maka agbamakwụkwọ
Echiche maka agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ imewe
Ịhọrọ oge oyi bouquet nke nwunye - ndụmọdụ ore fulawa
Kedu ihe na-akpata mgbu n'akụkụ aka nri?
Gịnị mere ndị di na nwunye ji arụ ụka
Postcard na February 23, aka aka, klas na foto
Ịṅụ sịga bụ ezigbo mmerụ na iji ihe omimi
Ụzọ kachasị ọhụrụ maka ọgwụgwọ nke ọrịa na-efe efe
Wraps na apple cider mmanya
Chicken drumsticks na multivark
Kedu ihe ụlọ mkpọrọ ahụ na-arọ? Ịkọwa akwụkwọ nrọ ndị na-ewu ewu
Otu ụlọ, onye na-akwara ihe na obere nwa
Nri kacha mma maka ngwa ngwa ngwa ngwa
Kedu ihe mere m ji agba mmiri n'abalị? Nkebi nke 2
Tortellini na peas